मत्ती १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१० यसकारण उहाँले आफ्ना बाह्र जना चेलालाई बोलाउनुभयो र दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई* धपाउने अनि हर प्रकारका रोगबिमार निको पार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिनुभयो। २ ती बाह्र जना प्रेषितका* नाम हुन्‌: पत्रुस भनिने सिमोन र तिनको भाइ अन्द्रियास; याकूब र तिनको भाइ यूहन्ना, जो जब्दीका छोराहरू हुन्‌; ३ फिलिप र बारथोलोमाइ; थोमा अनि कर उठाउने मत्ती; याकूब, जो अल्फयसका छोरा हुन्‌ र थेदियस; ४ जोसिलो भनिने सिमोन र यहूदा इस्करियोत, जसले पछि येशूलाई धोका दिए। ५ यी बाह्र जनालाई येशूले यस्तो आदेश दिएर पठाउनुभयो: “अन्यजातिहरूको इलाकामा नजाओ र सामरीहरूको सहरमा पनि नपस; ६ बरु इस्राएलका ती मानिसहरूकहाँ मात्र जाओ जो हराएका भेडाहरूजस्ता छन्‌। ७ जाओ र यसो भन्दै प्रचार गर: ‘स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ।’ ८ बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जिउँदो बनाओ, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाओ। तिमीहरूले सित्तैंमा पायौ, सित्तैंमा देओ। ९ तिमीहरूले आफ्नो थैलीमा सुन, चाँदी वा तामा नलैजाओ। १० यात्राको लागि खाजाको पोको, अर्को एकसरो लुगा, चप्पल अनि लौरो पनि नलैजाओ; किनकि कामदार भोजनको हकदार हुन्छ। ११ “तिमीहरू जुन सहर वा गाउँमा पसौला, त्यहाँ को योग्य छ भनी खोज र त्यो ठाउँ नछोडुन्जेल तिनीसँगै बस। १२ जब तिमीहरू कुनै घरभित्र पस्छौ, तब त्यस घरमा भएकाहरूलाई अभिवादन गर्नुका साथै शान्तिको कामना गर; १३ त्यस घरमा भएकाहरू योग्य रहेछन्‌ भने तिमीहरूले कामना गरेको शान्ति तिनीहरूमाथि रहोस्; तर यदि योग्य रहेनछन्‌ भने तिमीहरूको शान्ति तिमीहरूकहाँ नै फर्किआओस्। १४ यदि कसैले तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैन वा तिमीहरूको कुरा सुन्दैन भने त्यस घर वा सहरबाट बाहिर निस्कँदा तिमीहरूले आफ्नो पैतालाको धूलो टकटकाइदेओ।* १५ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, न्यायको दिनमा सदोम र गमोराले भन्दा त्यस सहरले चर्को दण्ड पाउनेछ। १६ “हेर, म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु र तिमीहरू ब्वाँसाहरूको बीचमा परेका भेडाहरूजस्तै हुनेछौ; त्यसैले तिमीहरू सर्पजस्तै चनाखो तर ढुकुरजस्तै सुधो होओ। १७ मानिसहरूदेखि तिमीहरू होसियार होओ; किनभने तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा सुम्पिनेछन्‌ अनि सभाघरहरूमा कोर्रा लगाउनेछन्‌। १८ मेरो खातिर तिमीहरू राज्यपाल र राजाहरूसामु उभ्याइनेछौ। अनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई र जाति-जातिका मानिसहरूलाई मेरो विषयमा साक्षी दिनेछौ। १९ तर तिनीहरूले तिमीहरूलाई पक्रेर लैजाँदा कसरी बोल्ने र के बोल्ने भनी चिन्ता नगर; के बोल्ने हो, त्यो तिमीहरूले त्यतिखेरै थाह पाउनेछौ; २० किनकि तिमीहरू आफ्नै भरमा होइन तर तिमीहरूका बुबाको पवित्र शक्तिको मदत पाएर बोल्नेछौ। २१ अर्को कुरा, दाइले भाइलाई र बुबाले छोरालाई मार्नको लागि सुम्पिनेछ अनि छोराछोरी आफ्ना आमाबाबुको विरुद्ध उठ्नेछन्‌ र तिनीहरूलाई मार्न लगाउनेछन्‌। २२ तिमीहरू मेरा चेला भएकाले सबै मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्‌; तर जसले अन्तसम्म सहन्छ, त्यसले उद्धार पाउनेछ। २३ जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई एउटा सहरमा खेदो गर्छन्‌, तब भागेर अर्को सहरमा जाओ। म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, मानिसको छोरा नआइपुगुन्जेल तिमीहरूले कुनै पनि हालतमा इस्राएलका सबै सहर अनि गाउँहरूमा प्रचार गर्न सिद्धयाइसकेका हुनेछैनौ। २४ “चेला आफ्नो गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन न त दास आफ्नो मालिकभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। २५ चेला आफ्नो गुरुजस्तो र दास आफ्नो मालिकजस्तो हुनु नै यथेष्ट छ। यदि मानिसहरूले घरको मालिकलाई त बालजिबुल* भन्छन्‌ भने तिनको घरकाहरूलाई झन्‌ किन नभन्लान्‌? २६ यसकारण तिनीहरूसित नडराओ; लुकाइएको यस्तो कुनै कुरा छैन, जो प्रकट नहोस् अनि यस्तो कुनै गोप्य कुरा छैन, जो थाह नहोस्। २७ तिमीहरूलाई जे म अन्धकारमा भन्छु, त्यो उज्यालोमा भनिदेओ; अनि जे म खुसुक्क भन्छु, त्यो घरको धुरीबाट फुकिदेओ। २८ तिम्रो शरीर मार्न सक्ने तर तिम्रो जीवन* नाश गर्न नसक्नेहरूसित * नडराऊ तर तिम्रो शरीर र जीवन दुवैलाई गेहेन्नामा* नाश गर्न सक्नेसित डराऊ। २९ के दुइटा भँगेरा एक पैसामा* बिक्दैन र? तैपनि तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूका बुबाले थाह नपाई भुइँमा झर्दैन। ३० तर तिमीहरूको कपालसमेत उहाँले गन्नुभएको छ। ३१ त्यसैले नडराओ: तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा पनि बहुमूल्य छौ। ३२ “जसले मलाई मानिसहरूसामु स्वीकार्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबासामु स्वीकार्नेछु; ३३ तर जसले मलाई मानिसहरूसामु इन्कार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबासामु इन्कार गर्नेछु। ३४ म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हुँ भनी नसम्झ; म शान्ति ल्याउन होइन तर फूट गराउन* आएको हुँ। ३५ किनकि म छोरालाई बुबाको विरुद्ध, छोरीलाई आमाको विरुद्ध अनि बुहारीलाई सासूको विरुद्ध उठाएर फूट गराउन आएको हुँ। ३६ वास्तवमा मानिसको शत्रु उसको आफ्नै घरभित्रका मानिसहरू हुनेछन्‌। ३७ जसले आफ्नो बुबा अथवा आमालाई मलाई भन्दा बढी माया गर्छ, ऊ मेरो चेला हुन योग्य हुनेछैन; र जसले आफ्नो छोरा अथवा छोरीलाई मलाई भन्दा बढी माया गर्छ, ऊ मेरो चेला हुन योग्य हुनेछैन। ३८ जो आफ्नो यातनाको खम्बा* बोकेर मेरो पछि लाग्दैन, ऊ मेरो चेला हुन योग्य हुँदैन। ३९ आफ्नो ज्यान* जोगाउन खोज्नेले त्यो गुमाउनेछ र मेरो खातिर आफ्नो ज्यान गुमाउनेले त्यो पाउनेछ। ४० “जसले तिमीहरूलाई स्वागत गर्छ, उसले मलाई पनि स्वागत गर्छ र जसले मलाई स्वागत गर्छ, उसले मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि स्वागत गर्छ। ४१ यदि कसैले भविष्यवक्तालाई तिनी भविष्यवक्ता भएकै कारणले स्वागत गर्छ भने उसले भविष्यवक्ताले पाउने इनाम पाउनेछ र यदि कसैले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसलाई तिनी असल मानिस भएकै कारणले स्वागत गर्छ भने उसले असल मानिसले पाउने इनाम पाउनेछ। ४२ अनि यदि कसैले यीमध्ये सबैभन्दा सानालाई मेरो चेला हो भनी सम्झेर एक कचौरा चिसो पानी पिउन दिन्छ भने म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, उसले कुनै पनि हालतमा आफ्नो इनाम गुमाउनेछैन।”
^ मत्ती १०:१ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १०:२ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
^ मत्ती १०:१४ * पैतालाको धूलो टकटकाउनुले आफू जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको सङ्केत गर्छ।
^ मत्ती १०:२५ * यो सैतानको अर्को नाम हो।
^ मत्ती १०:२८ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १०:२८ * वा, “भविष्यमा फेरि जीवित हुने आशा खोस्न नसक्नेहरूसित।”
^ मत्ती १०:२८ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १०:२९ * शाब्दिक, “एक असारियन।” एक असारियन बराबर एक दिनको ज्यालाको १/१६ भाग हुन्छ।
^ मत्ती १०:३४ * शाब्दिक, “तरवार चलाउन।”
^ मत्ती १०:३८ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १०:३९ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।